ကောင်းမွန်ဝင်း: ဂျပန်ဗူးသီး နဲ. ကျွန်မ
ကျွန်မဗူးသီးကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ဗူးသီးတင်မကပါဘူး၊ ဗူးရွက် (ဗူးရွက်ကြော်ချက်)။ ဗူးညွန်.( ဗူးညွန်.ဟင်းချို) ဗူးရိုး(ဗူးရိုးပြုတ်ကို ငါးပိရည်နဲ. တို.စားရတာ)၊ ပြောရရင် ဗူးပင်တစ်ပင်လုံး နီးပါးပါပဲ။ ဂျပန်ရောက်ပြီး ဗူးသီးမစားရတော့ဘူးလို.ထင်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ. ဗူးသီး ကိုဝယ် လို.ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. ဆောင်းရာသီမှာတော့မရနိုင်ပါဘူး ။ သို.သော်လည်း ဒီကိစ္စ (ဂျပန်ဗူးသီး) ကို ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဂျပန်မှာဗူးသီးနှစ်မျိုးရှိနေတာ နဲ. ဂျပန်လူမျိုး တွေကဗူးသီးကို အစိုစားတာထက် အခြောက်လှန်းပြီးစားတာက ပုံမှန်စားရိုးစားစဉ်ဖြစ်နေတာကိုပါ။ ပြောချင်တဲ. အကြောင်းအရာက ဂျပန်ဗူးသီးအကြောင်းဆိုပေမယ့်၊ အခက်တွေ.တာက ဗူးသီးနှစ်မျိုးရှိနေလို. ဗူးသီးကို ဗူးသီးလို. မြန်မာလို လွယ်လွယ်ကူကူ ပြောလို.မရပြန်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်မဘာသာ အဓိ ပ္ပါယ်သတ်မှတ်ပြီး အမည်ပေးထားတာ ကတော့ (၁)စင်နဲ. စိုက်တဲ့ဗူးသီး (၂) အခင်းနဲ.စိုက်တဲ့ဗူးသီး ပါ။
အဲဒီဘူးသီးနှစ်မျိုးမှာစိတ်ဝင်စားစရာတွေရှိနေတာက ကျမအတွက်ဘူးသီးကို ပိုကြိုက်လာစေတော့တာပါပဲ။ ပထမတစ်မျိုးကနေစပြောပြပါရစေ။
(၁)စင်နဲ.စိုက်တဲ.ဗူးသီး (Bottle Gourd) L. siceraria var. hispida
သူကတကယ့်ကို ကျွန်မတို.မြန်မာပြည်ကဗူးသီးပါပဲ။ သူ.ရဲ.ပုံစံကလည်းဗူးးသီးပုံ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရှိပါတယ်။သူ.ကို ဂျပန်လို ဟျေားတမ်း （ヒョウタン）Hyou Tan လို.ခေါ်ပါတယ်။ မူလဇာတိက အာဖရိကတိုက်ကလာပါတယ်။ သူကအိန္ဒိယဘက်ကနေ တဆင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ပျံ.နှံ.ခဲ့
အသီးကို အခြောက်ခံပြီး ရေဘူးနဲ. အရက်ထဲ့တဲ့ဘူးအဖြစ်ရှေးခေတ် ဂျပန်လူမျိုးတွေသုံးခဲ့ကြတယ်တဲ.။ ဗူးသီးကို အသုံးဝင်မှု ၊ နမိတ်ကောင်းမှု တွေရှိတယ်ဆိုပြီး ဆာမူရိုင်းတွေအုပ်စိုးတဲ. ခေတ်မှာ အစိုးရအဖွဲ.တွေရဲ. တံဆိပ်၊ အလံအမှတ်အသား၊ တွေမှာ သင်္ကေတတံဆိပ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြတယ်တဲ.။ အခုလက်ရှိ အိုးအိုးဆားကား （大阪府）OSAKAအုပ်ချုပ်ရေးရုံးအဖွဲ.အစည်းတံဆိပ်ကလည်း ဗူးသီးခြောက်ပုံသင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ ဂိဖုခရိုင် （岐阜県）GIFU-Ken ၊ ယေားရိုးချောမြို.（養老町）Yorou-Chou ဟာ ဗူးသီးအများဆုံးထွက်ရှိရာဒေသဖြစ်ပါတယ်။
(၂) အခင်းနဲ.စိုက်တဲ့ဗူးသီး (Gourd) L. siceraria var. gourda
ဒီဗူးသီးကတော့ ပုံမှာမြင်တွေ.ရတဲ.အတိုင်းလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းနဲ.ပေါ့။ ပြီးတော့ မြေကြီးပေါ်မှာ ဖရဲသီးလိုပဲ အခင်းနဲ.စိုက်ပြီး အသီးသီးပါတယ်။ ဂျပန်လို ယူးဂါ့အို （夕顔）Yuu Ga O　လို.ခေါ်ပါတယ်။ စင်နဲ.စိုက်တဲ.ဗူးသီးနဲ. ရုက္ခဗေဒအမျိုးအစားကော မူလဇာတိကောအတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့်သူက ဂျပန်ပြည်ထဲကို တရုပ်ပြည်ကနေတဆင့် သက္ကရာဇ်(၇၉၄-၁၁၈၅)လောက်မှာရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကထွက်ရှိရာဒေသကတော့ တိုချိဂိခရိုင် （栃木県）Tochigi-Ken ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗူးသီးကိုတော့ အခြောက်လှန်းပြီးစားသုံးခြင်းဖြင့် လူကြိုက်များပါတယ်။ အဲဒါကိုတော့ ဂျပန်လို ခမ်းပျေား（かんぴょう）Kan Pyou လို. ခေါ်ပါတယ်။
ဂျပန်တွေ ဗူးသီးကို ဘယ်လိုအခြောက်လှန်းတယ်ဆိုတာ ဓါတ်ပုံများနဲ. ကြည့်ရှုတွေ.ရှိနိုင်ပါတယ်။
အသီးတစ်လုံးကိုကြိုးတစ်ချောင်းပုံစံဖြစ်အောင်အသားကို အလွှာလိုက်ကြီး နွှာပါတယ်။
စက်နဲ.နွှာတာဖြစ်တဲ့ အတွက်အူတိုင်ကို ချန်ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူ နွှာယူနိုင်ပါတယ်။ အူတိုင်ကို တော့ လွှင့်ပစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အဲဒီအူတိုင်ကို အနီးပတ်ဝန်းကျင်က အိမ်ရှင်မတွေက လာတောင်းယူပြီး အလိုရှိသလို ဥာဏ်ကွန်.မြူးပြီး ဟင်းနဲ. မုန်.အမျိုးမျိုးလုပ်စားကြတယ်လို. ဆိုပါတယ်။
ကျွန်မအနေနဲ.ကတော့ ဒီလောက်ချိုပြီးအရသာရှိတဲ့ဗူးသီးကို ဘာလို.များ အခြောက်လှန်းပြီးမှ စားရတာလည်းလို. စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါနဲ. ဂျပန်လူမျိုးတွေကိုမေးကြည့်တော့ တကယ်က အခြောက်လှန်းပြီးမှစားရတား အစိမ်းစားတာနည်းတယ်လို. ဆိုပါတယ်။ အခြောက်လှန်းတော့ အချိန်ကုန်၊လူပမ်း၊ အလုပ်ပျက်၊ စားရိတ်တက် မဟုတ်ဘူးလား။ ကျွန်မ သူတို. အဖြေကို သိပ်သဘောမကျတာနဲ. ရှာဖွေလေ့လာကြည့်တော့ အခြောက်ခံပြီးစားတဲ.အတွက် တစ်နှစ်ပါတ်လုံးစားသုံးနိုင်တယ်၊ အစိုစားနည်းအပြင်အခြောက်ခံထားတဲ. အတွက် အခြားအမယ်မျိုးစုံကို တီထွင်ချက်ပြုတ်နိုင်တယ်၊ ဗူးသီးရဲ. အထဲမှာပါဝင်တဲ. ကယ်လစီယမ်(အရိုးနဲ. သွားတွေကို သန်မာစေတဲ.)ဓါတ်ဟာ အခြားအသီးအနှံများထက်မြင့်မားတဲ.အတွက် တစ်နှစ်ပါတ်လုံးစားသုံးနိုင်ရန် အခြောက်ခံပြီးသိမ်းဆည်းခြင်းကို ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို သွားတွေ.ပါတယ်။
ဗူးသီးအစိုမှာပါဝင်တဲ. ကယ်လစီယမ်နဲ. ဗူးသီးခြောက်မှာပါဝင်တဲ. ကယ်လ်စီယမ်ပါဝင်မှုကိုလည်း တွေ.ရပါတယ်။
ဗူးသီးအခြောက်(၁၀၀)ဂရမ်တွင်ပါဝင်သော ကယ်လ်စီယမ် -၂၅၀မီလီဂရမ်
ဗူးသီးအစို (၁၀၀) ဂရမ်တွင်ပါဝင်သော ကယ်လ်စီယမ် -၂၈မီလီဂရမ်
ဥပမာ၊ နွားနို.နဲ. ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် တော့။ နွားနို. (၁၀၀)ဂရမ်တွင်ပါဝင်သော ကယ်လ်စီယမ် -၁၁၀မီလီဂရမ် ဖြစ်ပါတယ်။
ကယ်လ်စီယမ်ကို စားသုံးခြင်းဖြင့် အရိုးဆတ်ခြင်း၊ ပင်ပမ်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း စသည်တို.ကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗူးသီးနဲ. ဗူးသီးခြောက်ကိုစားသုံးခြင်းဖြင့် ခန္ဒာကိုယ်တွင်းက မလိုအပ်တဲ. အရာများကို ဆီး၊ ၀မ်းတို.မှတဆင့် ဖယ်ထုတ်သွားနိုင်တဲ. အတွက် အဆီပိုများကို လျော့စေပြီး မ၀အောင် ကာကွယ်မှု ကိုလည်း ရစေပါတယ်တဲ.။
ကျွန်မ၀ယ်စားတဲ.ဗူးသီးကတော့ နံပါတ်(၂)အမျိုးအစားဖြစ်တဲ. အခင်းနဲ. စိုက်တဲ. ဗူးသီးပါ၊ သူ.ကို တစ်ခါတစ်လေ ရပ်ကွက်ထဲက ကုန်စိမ်းဆိုင် （八百屋） Ya Ou Ya တွေနဲ. ၊ စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေ ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ရောင်းချတဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်တွေမှာ တွေ.ရှိနိုင်ပါတယ်။
တိုကျိုက၊ တကာဒါနော့ ဘာဘာဘူတာ နားက Golden Eagle(ကိုမျိုးခိုင်)ဆိုင် မှာလည်းပေါ်တဲ.အချိန်တွေမှာဝယ်စားနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ ဗူးသီးပေါ်ချိန်ဆို လမ်းသွားရင်းကုန်စိမ်းဆိုင်တွေ.ရင် ဗူးသီးကို ရှာရင်းလမ်းလျှောက်ပါတယ်။ ဗူးသီးခြောက်ကတော့ စူပါမားကတ်က စားသောက်ကုန်ရောင်းတဲ. နေရာမှာ အချိန်မရွေးရနိုင်ပေမယ့် ဈေးကြီးပြီး နဲနဲပဲရလို. ၀ယ်မစားပါဘူး။
စာဖတ်သူလည်း ဒီတစ်ခါဗူးသီးတွေ.ရင် ၀ယ်စားကြည့်ပါဦးနော်။
ငယ်ငယ်တုံးက ကျိုက်ထီးရိုးသွားရင် တောင်တက်လမ်းက ဗူးသီးကြော်ဆိုင်တွေမှာ ရေးထားတာ အခုထက်ထိ မျက်စိထဲမှာမြင်ယောင်မိတယ်။ “ဗူးသီးဖီလင်၊ အချဉ်အရသာ” တဲ. ။
ရန်ကုန်က ဒဂုံမြောက်ပိုင်းကအိမ်မှာ ဗူးစင်ထိုးပြီး ဗူးသီးစိုက်ပေးတဲ. ဖေဖေ.ကို သတိရလျှက်.........
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Wednesday, August 26, 2009
ဗူးသီးကို အခြောက်လှမ်းတာ တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ မကောင်းမွန်ဝင်း။ ကိုယ့်မြန်မာပြည်မှာ အစိမ်းကနေ ချက်စားလိုက်ကြတာပဲ ဆိုတော့ ဆန်းနေပါတယ်။ နောက်မှ မကောင်းမွန်ဝင်းရေးထားသလို အထားခံတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ နေရာတကာမှာ သိပ်ကို Creative ဖြစ်ကြတာပဲနော်...
ကျွန်မလည်း ဘူးသီးကြိုက်တယ် ။မြန်မာပြည်မှာက အပင်နဲ့စိုက်တာပဲ မြင်ဘူးတယ် ။ဒီဘလော့ ကိုဖတ်မှပဲ ဘူးသီးရဲ့ကြောင်းကို ပိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ် ။ ပြောရင်းနဲ့ စားချင်လာပြီ ထူးဆန်းတယ် ဗီယက်နန်မှာ ဘူးသီးမရှိဘူး။ လိုက်ရှာကြည့်အုံးမယ် ... Cam on Ma Mon !! =Thank you Ma Mon ...
ကျနော် သေချာကြည့်ရသလောက် ကျောက်ဖရုံသီး
ကျနော် အကြည့်မှားတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.။